कोइनबेस Segwit को अन्तिम परीक्षण सुरु - Blockchain समाचार
फेब्रुअरी 6, 2018 व्यवस्थापक
कोइनबेस Segwit को अन्तिम परीक्षण सुरु
कोइनबेस Bitcoin SegWit परीक्षण यसको अन्तिम चरणहरु छ भनेर ट्विटर मा घोषणा गरेको छ, र Bitcoin पठाउने र प्राप्त लागि उपलब्ध हुनेछ “अर्को केही हप्ता।” यो Bitcoin गरेको शुल्क र स्थानान्तरण पटक कम गर्न डिजाइन गरिएको छ, र थप यसको नेटवर्क मा लोड कम.
BTC: बारेमा लागि कोइनबेस गरेको GDAX विनिमय खाताहरूमा USD जोडी 5% Bitcoin गरेको दैनिक व्यापार मात्रा को, CoinMarketCap अनुसार. तपाईंले अन्य कोइनबेस दलाल BTC सेवामा थप्न, अन्य मुद्रा जोडी र अन्य लेनदेन यो दैनिक लेनदेन एक धेरै भाग कोइनबेस / GDAX मार्फत कि मान गर्न सुरक्षित.
जस्तै यो विकास feasibly वैश्विक Bitcoin कारोबार समय र शुल्क एक छुट्याउन असर गर्न सक्छ.
Blockchain समाचार 27.06.2018
सेकेन्ड टिप्पणी च खोज्ने ...
अघिल्लो पोस्ट:विभिन्न देशहरूमा, Bitcoin मूल्य फरक हुन सक्छ
अर्को पोस्ट:मात्र चार गुप्त आदानप्रदान दक्षिण कोरियाली नियामक को आवश्यकताहरु पालन